Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato malaasta bisadaha | Bisadaha Noti
Sawir - Bitiba.es
Bisadu inta badan waqtigeeda waxa ay ku qaadataa hal shay oo keliya: is qurxinteeda. Waa xayawaan aad u nadiif ah oo ka saari doona wixii harsan iyo wasakhda isla marka uu xoogaa raaxo dareemo. Si kastaba ha noqotee, nadiifinta inta badan way dhammaan kartaa dareemid raaxo darro calooshaada cunista timaha.
Nasiib wanaagse, wax badan baan kaa caawin karnaa si looga hortago kubbadaha timaha laga baqo iyo, marar badan, in laga takhaluso haddii aan ku siinno buunshaha bisadaha. Laakiin maxay tahay iyo intee jeer ayey tahay inaad siiso? Waxaan ka wada hadli doonnaa waxaas oo dhan iyo inbadan oo ka mid ah tan gaarka ah. Miyaad seegaysaa?
1 Waa maxay kubbadaha timaha?
2 Sideen ku ogaan karaa in bisadaydu leedahay kubbado timo?
3 Sida laguu caawiyo
4 Dhammaan wixii ku saabsan malt loogu talagalay bisadaha
4.1 Maxay tahay?
4.2 Maxay tahay?
4.3 Sidee loo siiyaa isaga?
4.4 Waa maxay qiyaasta?
4.5 Iyo qiimaheeda?
Waa maxay kubbadaha timaha?
Bisadu waqti badan ayay ku bixisaa inay ku ilaaliso jaakadoodu inay ahaato mid nadiif ah, oo aan nadiif ahayn. Waa hawl ay si fudud u qabato, maadaama uu carrabkiisu leeyahay qodaxyo yaryar oo jiidaya dhammaan dhogorta si fudud u soo dhacaysa iyo wasakhda ay yeelan karto. Dhibaatadu waxay tahay inaadan haysan ikhtiyaar aan ka ahayn inaad liqdo, tan iyo aan awoodi karin inaan tufno.
Caadi ahaan, waxaa lagu ciribtiri doonaa saxarada, laakiin markii tiro badan oo timo ah la liqo, kubbadaha laga baqo ayaa sameyn kara inay isku dayi doonaan inay ku saaraan matag. Sidaas oo ay tahay, mararka qaarkood ma awoodo in ay ka saarto iyada oo ay ku dhegto xiidmaha, taasina waxay noqon doontaa goorta waa inaan ku caawinaa.
Sideen ku ogaan karaa in bisadaydu leedahay kubbado timo?
Kubbadaha timaha, haddii ay ku dhegaan mindhicirka, waxay bisadda ka hor istaagi karaan inay nolol caadi ah ku noolaato. Calaamadaha aan arki doonno waa:
Matag: waxay eryi doontaa oo kaliya dareere, laakiin sidoo kale cuntada.
Calool istaag: dhogorta waa inay ku saxarootaa ugu yaraan hal mar maalintii (waxa ugu fiican ayaa ah 2 ama 3). Haddii aad badiso inta badan, waa sababta oo ah inaad calool fadhido.
Arxandarro, murugo: Ma rabi doontid inaad ciyaartid, oo waxaad u badan tahay inaad go'doomiso naftaada.
Dib u soo noqnoqoshada: wuxuu isku dayi doonaa inuu cayriyo kubbadaha timaha.
Dib u dejin: Waad cuni kartaa, laakiin si aad u aragto oo keliya, marka cuntada ay gaarto caloosha, waad iska saari kartaa kubbadaha adigoon matagin.
Sida laguu caawiyo
Waxaan sameyn karnaa dhowr waxyaalood si aan kaaga caawino inaad noloshaada la qabsato. Waxa ugu muhiimsan waa in la isku dayo in la siiyo a qaado khal. Kani waa cunto joojin kara xanuunkaaga, maadaama ay udhaqmeyso sidii wax soo saar la sii daayay oo kale: waxay si fiican u nadiifisaa xiidmaha, waxay qaadataa wax kasta - ama ku dhowaad wax kasta - oo wadadeeda ah. Haddii ay dhacdo inaadan liqin, waxaan ku siin doonnaa sirinjiin aan irbad lahayn, oo tartiib tartiib ah oo aan kugu qasbi doonin
Waxyaabaha kale ee sida aadka ah u socon kara waa calalinta iyo wax liqidda caws bisad, oo aan ka heli doonno iib ahaan supermarket kasta ama dukaamada xayawaanka. Badanaa waxaa lagu iibiyaa xirmada horay loo sii diyaariyay, markaa waa inaan kaliya biyo waraabino oo aan dhigno qol ay ka galaan ilays badan oo dabiici ah. Cilladaha kaliya ee jira ayaa ah inay qaadato bil in loo diyaar garoobo isticmaalkeeda, marka waa inaad mid heshaa intaan dhibaatadu soo bixin.
Mid ka mid ah howlaha dhammaanteen la nool xayawaankan waa inaan qabanno cadaya. Haddii aad leedahay timo dhaadheer ama gaaban, waxaa lagama maarmaan ah inaad cadayato ugu yaraan hal jeer maalintii (1 haddii ay aad u timo badan tahay), labadaba si looga hortago kubbadaha timaha inay sameystaan ​​iyo inaad isku daydo inaad caafimaadkaaga uga sii darto mar uun markaad haysatid. Waxaan u isticmaali doonaa shanlo ku habboon ama cadayashada tan, si aan u dhammeyno waxaan dhaafi doonnaa FURminator, oo ah burush leh xoqitaan adag oo baabi'inaya ficil ahaan dhammaan timaha dhintay.
Ugu dambeyntiina, waan ku siin karnaa buunshaha bisadaha, kuwaas oo aan si dheer ugaala hadlayno hoosta.
Dhammaan wixii ku saabsan malt loogu talagalay bisadaha
GimCat Malt-Soft Extra, ...
Maltku waa koollo dabiici ah oo laga soo dheegtay oo aad u xusuusiya malabka, laakiin ka sii cufan. Wuxuu ka kooban yahay saliidaha khudradda iyo dufanka, soosaarida malta, fibre, waxyaabaha laga sameeyo caanaha iyo khamiirka. Mararka qaarkood waxayna kuxirantahay astaanta waxay ka koobnaan kartaa midabyo, wax ilaaliyayaal iyo fitamiino.
Waxaa loo iibiyaa qaabab kala duwan: qaab tuubo ah ama sidii daaweyn (loola dhaqmo) bisadaha. Inta badan ee lagu taliyay ayaa ah tan ugu horeysa, maadaama ay fududahay in la dalbado oo aad si fiican u xakamayn karto inta malt la siiyay xayawaanka.
Malt wuxuu leeyahay a saameyn caloosha jilcisa Waxay ka caawineysaa hagaajinta socodka xiidmaha, waxay gacan ka geysaneysaa cayrinta kubbadaha timaha.
Sidee loo siiyaa isaga?
Sidaan soo sheegnay bisadu waxay umuuqataa mid ku mashquulsan nadaafada shaqsiga 🙂. Marka, waan ka faa'iideysan karnaa taas iyo in yar dul dhig dhabankiisa. Waxay u badan tahay inaysan qaadan doonin laba ilbidhiqsi inaad xoqdo, oo liqaan.
Haddii ay dhacdo in doofaarradeena ay tahay mid qaas ah oo isku dayaysa inay si kale uga saarto, una gudbiso tusaale ahaan buste, waad dooran kartaa geli, mar labaad, in yar, cuntadooda iskuna qas.
Waa maxay qiyaasta?
Qadarka saxda ah wuxuu noqon doonaa a kubad le'eg yicib. Waxaa muhiim ah in aan wax badan la siinin maadaama ay noqon karto mid wax tar leh. Joogtayntu waxay noqon doontaa laba jeer usbuucii haddii aad timo gaaban leedahay, ama afar haddii aad leedahay timo dhaadheer.
Qiimuhu wuxuu ku xirnaan doonaa, ka sarreeya dhammaan, astaanta. Laakiin inaad fikrad kaa siiso, way ku kacaysaa inta udhaxeysa 2 iyo 6 euro.
Sikastaba, hadaan aragno in saaxiibkeen uusan horumarin dhowr maalmood, waxay noqon doontaa mid kuhaboon in loo qaado dhakhtarka xoolaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Maro bisad
Boodhadhka loogu talagalay bisadaha ayaa sidoo kale ku jira cuntooyin badan oo bisad ah oo ay gacanta ku hayaan kubbadda timaha. Maqaal aad u dhammaystiran, burushyada qaabka loo dhammaystiray ayaa ah waxyaabo milkiileyaal badan aysan xisaabta ku darsan oo ay wax badan ka caawiso. Hambalyo maqaalka.
Aad baad ugu mahadsantahay ereyadaada. 🙂
Maxay bisaduhu u hunguriyaan